Eshibhile CNC Milling Engagqwali izingxenye ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Izingxenye eziyinhloko zensimbi engagqwali yi-carbon, i-chromium, i-nickel, nezinye izinto ze-alloy ezifana ne-molybdenum, ithusi ne-nitrogen. Into eyinhloko yokuhlanganisa insimbi engagqwali yi-Cr (chromium), futhi kuphela lapho okuqukethwe kwe-Cr kufinyelela inani elithile, insimbi inokumelana nokugqwala. Ngakho-ke, insimbi engagqwali ngokuvamile iqukethe okungenani u-10.5% we-Cr (chromium).
Izinsimbi ezingenasici ze-CNC milling-precision zensimbi engagqwali yokugaya izingxenye
Insimbi engenasici iqukethe nezinto ezifana no-Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, no-Cu. Insimbi engenasici inezici ezinhle kakhulu ezinjengamandla ayingqayizivele, ukumelana nokugqoka okuphezulu, ukumelana nokugqwala okuphakeme nokumelana nokugqwala. Ngakho-ke, isetshenziswa kabanzi embonini, imishini yokudla, umkhakha we-electromechanical, umkhakha wezinto zasendlini nomhlobiso wasekhaya, umkhakha wokuqeda. Amathemba wokusebenza nentuthuko yensimbi engagqwali izoba banzi futhi ibanzi, kepha ukusetshenziswa nokuthuthukiswa kwensimbi engagqwali kuncike kakhulu ezingeni lokuthuthukiswa kobuchwepheshe bayo bokwelashwa komhlaba.
Izinzuzo ze-Ouzhan zensimbi engagqwali egayiwe izingxenye
- Ukuvikelwa okuluhlaza kanye nokwezemvelo, insimbi engagqwali ingavuselelwa kabusha ngo-100%, ngeke idale ukungcoliswa kwemvelo, futhi ifanele intuthuko esimeme; imfucuza yensimbi engagqwali nayo inenani elikhulu lezomnotho.
- Izakhiwo zamakhemikhali: Ukumelana namakhemikhali nokumelana nokugqwala kwe-electrochemical yizona ezihamba phambili phakathi kwensimbi, okwesibili kuphela kuma-alloys we-titanium.
- Izakhiwo zomzimba: ukumelana nokushisa, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana okushisa okuphansi kanye nokumelana nokushisa okushisa okuphansi kakhulu.
- Izakhiwo zemishini: Ngokuya ngezinhlobo ezahlukene zensimbi engagqwali, izakhiwo zemishini zihlukile. Insimbi engagqwali yeMartensitic inamandla amakhulu nobulukhuni, futhi ilungele ukukhiqiza izingxenye ezingamelana nokugqwala ezidinga amandla aphakeme nokuqina kokugqoka okufana nemiphini ye-turbine shafts nensimbi engagqwali. Imimese, amabheringi wensimbi engagqwali, njll. Insimbi engagqwali i-austenitic inepulasitiki enhle, hhayi amandla aphakeme kepha ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu phakathi kwezinsimbi ezingenasici. Ifanele imicimbi edinga ukumelana nokugqwala kepha izakhiwo eziphansi zomshini, njengezitshalo zamakhemikhali nezitshalo zikamanyolo. Izinto zokwakha ze-sulfuric acid kanye ne-hydrochloric acid abakhiqizi, njll., Futhi, zingasetshenziswa ezimbonini zamasosha ezinjengemikhumbi-ngwenya. Insimbi engagqwali ye-Ferritic inezinto ezilinganayo zomshini namandla aphansi, kepha iyamelana ne-oxidation futhi ilungele izingxenye ezahlukahlukene zesithando sezimboni.
- Inqubo yokusebenza: Insimbi engagqwali yase-Austenitic inenqubo yokusebenza okuhle kakhulu. Ngenxa yepulasitiki yayo enhle, ingacutshungulwa ibe amapuleti ahlukahlukene, amashubhu namanye amaphrofayli, afanele ukucindezelwa kwengcindezi. Insimbi engagqwali yeMartensitic inenqubo embi yokusebenza ngenxa yobulukhuni obuphakeme.
Isevisi yokugaya insimbi engagqwali ye-OEM umkhiqizi wezingxenye zensimbi engagqwali
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ingacubungula insimbi engagqwali enezingxenye ezinemba futhi ezinokwethenjelwa zokucaca okuphezulu ze-CNC. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wensimbi engagqwali. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yensimbi engenasici ye-CNC inikezwe ngokuhambisana nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana wensimbi engagqwali imikhiqizo ye-CNC yokugaya kumakhasimende ethu abalulekile.
Yini ukusetshenziswa kwezinsimbi ezingagqwali ezifinyiwe
1. Izingxenye ze-Austenitic insimbi engagqwali ezifinyiwe zinokusebenza okuphelele nokuhle okuphelele, futhi zisetshenziswa kakhulu ekudleni, imishini ejwayelekile yamakhemikhali, namandla e-athomu;
2. Izinsimbi ezifinywe ngensimbi ezingenansimbi zeFerritic, ezisetshenziswa kakhulu ezintweni eziphikisanayo;
3. Izingxenye zeMartensitic insimbi engagqwali ezisikiwe, ezisetshenziswa kakhulu kwimishini emelana ne-sulfuric acid, i-phosphoric acid, i-formic acid, ne-acetic acid;
4. Izingxenye zokugaya insimbi engagqwali zeChromium-nickel-molybdenum, ezisetshenziswa kakhulu ekuhlanzeni uwoyela, umanyolo, iphepha, uphethiloli, amakhemikhali nezinye izimboni ukukhiqiza ukushisa nokushisa.
Izinzuzo zensimbi yokugaya insimbi engagqwali
- Yonke imikhiqizo eqondile yensimbi engenasici ye-CNC ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokukhiqiza ngokunemba izingxenye zensimbi engagqwali.
- I-Ouzhan inemishini engaphezu kokucubungula, izinsizakalo ezihlanganisiwe, imigqa ejwayelekile yokukhiqiza, futhi iza nezitifiketi ezibonakalayo kanye nemibiko yokuhlolwa komkhiqizo.
Langaphambilini Ipholishiwe i-aluminium alloy umnyango kanye nezingxenye zokucubungula amawindi
Olandelayo: Kwenziwe ngentando engagqwali milling izingxenye kucutshungulwa izingxenye imishini
Nomkhiqizi Chinese CNC ngokwezifiso carbon steel mi ...
Ngokwezifiso opholile zethusi Milling izingxenye machining a ...
OEM carbon steel Milling machining zezimboni p ...
Kwenziwe ngentando insimbi engagqwali Milling izingxenye proces ...